အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့်မီထရိုလိုင်းဘူတာအမည်များ၏ Metrobus Metrobus ဘူတာ - rayhab နေကြတယ်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့်မီထရိုလိုင်းဘူတာအမည်များ၏ Metrobus Metrobus ဘူတာ
04 / 08 / 2019 Levent Ozen 34 အစ္စတန်ဘူလ်, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, Metrobus, တူရကီ, ဗွီဒီယို 4
အစ္စတန်ဘူလ်မက်ထရိုနှင့် metrobus လိုင်းများ
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Metrobus လိုင်း Metrobus ဘူတာက Metro ဘူတာအမည်များ: အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Metrobus Lines (လက်ရှိ), Avcılar Metrobus, ရထားစနစ်များ, Aksaray - Metrobus ရပ်သစ်ကိုလိုင်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, အစ္စတန်ဘူလ်သင်မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအစီအစဉ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်အောက်တွင်။ ပိုကြီးတဲ့မြေပုံနှင့်ဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုဖို့ပုံရိပ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
အသစ်ကဆက်ပြောသည် Kadikoy-Kartal မီထရိုလိုင်းနှင့်ဘူတာရုံအမည်များကိုမြေပုံ
အသစ် Kadikoy Kartal မက်ထရိုလိုင်းဖွင့်လှစ်မယ့်စုစုပေါင်း 16 ဘူတာရုံရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်ဘူတာရုံအမည်များကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်:
လင်းယုန်။ အဆိုပါက Metro 21 ကီလိုမီတာအရှည်နှင့်တဦးတည်းအဆုံးကနေ 32 မိနစ်တဦးတည်းအဆုံးသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ Metro ရဲ့နေ့စဉ်ခရီးသည်စွမ်းရည် 700 တထောင်အဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။
Metro လိုင်းနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်အခြားဆက်စပ် Maps ကို
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Metrobus လိုင်း၏အနာဂတ်စီမံကိန်းများကို
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Metrobus လိုင်း
TCDD Suburban Lines လေ့
Taksim -4။ Levent မြေအောက်ရထား,
ကျောက်ခေတ် - Aksaray - ဘတ်စ်ကားဘူတာ - လေဆိပ် / လေဆိပ်
Sisli - Mecidiyekoy - ရေလက်ကြား - Sogutlucesme,
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း / ကြိုးဆွဲရထား,
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro Stop အမည်များအသေးစိတ်, Metrobus Stop, Stop စာရင်း
အစ္စတန်ဘူလ်ရထားကွန်ယက်မြေပုံ, အ metrobus မှတ်တိုင်များ၏ Anatolian ခြမ်း
အစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းကွန်ယက်ဘူတာရုံအမည်များ, မက်ထရိုနှင့် metrobus, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Metrobus Sogutlucesme - Zincirlikuyu အကြားအမည်များကိုရပ်တန့်, Metrobus မှတ်တိုင်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်:
SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadikoy,
UZUNÇAYIR - Kadikoy,
BURHANIYE mAh ။ - Uskudar,
၏BOĞAZKÖPRÜ - Uskudar,
လူမှုဖူလုံရေး OKMEYDANI HST ။ - Sisli,
AYVANSARAY - ယောဘ,
EDİRNEKAPI - ယောဘ,
Adnan Menderes BULV ။ - Zeytinburnu,
İNCİRLİ - ဘဝကို - Bakirkoy,
FLORYA - - မှ Y.OV Bakirkoy,
ပရဒိသု mAh ။ - Bakirkoy,
KÜÇÜKÇEKMECE - Kucukcekmece,
IETT စခန်း - မုဆိုး,
ŞÜKRÜBEY - မုဆိုး,
İST.ÜNV.AVCI - on စခန်းမုဆိုး
xnumx't Metrobus ရပ်နားစုစုပေါင်းအရေအတွက်။
2019 အစ္စတန်ဘူလ်က Metro အစီအစဉ်
အစ္စတန်ဘူလ်, ထိုရထားလမ်းစနစ်ကအဓိကလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်နှစ်ပေါင်း 2019 မှတက်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်အသစ်ရထားလမ်းနှင့်မြေအောက်ရထားလိုင်းများစာရင်းကျင်းပလိမ့်မည်:
BeylikdüzüTÜYAP - Bahçelievler - Kirazli Metro ရထားစနစ်: 2017
Bakırköy - Incirli - Bahçelievler - Kirazli Metro ရထားစနစ်: 2017
Halkalı - အိုလံပစ်အားကစားကွင်း - Kayabaşı - Kayaşehir -3။ လေဆိပ်က Metro ရထားစနစ်: 2019
Başakşehir - Kayaşehir - Kayabaşı Metro ရထားစနစ်: 2018
Besiktas - ကျောက်ခေတ်က Metro ရထားစနစ်: 2019
Besiktas - Mecidiyekoy Metro ရထားစနစ်: 2019
4 ။ Levent - Hisarüstü Metro: 2015
Goztepe ဘဂ္ဂဒက်လမ်း - Göztepe E5 - Flat - Ümraniyeမက်ထရို: 2018
Üsküdar - Taksim - ချို - Çekmeköyမြေအောက်ရထား: 2015
Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli - ရွှေ့ပြောင်း Sabiha လေဆိပ်က Metro: 2018
Bob က - Kozyatağı - Kayışdağı - Imes - Dudullu Metro: 2019
လင်းယုန်သဲသောင်ပြင် - Pendik E5 - ရွှေ့ပြောင်း Sabiha လေဆိပ်က Metro: 2017
အစ္စတန်ဘူလ်မြေပုံထဲမှာ 2019 Metro နှင့် Metrobus
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD သမားရိုးကျလိုင်းများသည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားလိုင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုယူပါလိမ့်မည် 28 / 09 / 2017 TCDD သမားရိုးကျလိုင်းများ, A1 Group မှဂျော့2နှစ်ပေါင်း, ဝန်ဆောင်မှုအတွက် A3 ငျ့မြန်နှုန်းရထားလိုင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားလိုင်းများအတွက် (TCDD) TCDD သမားရိုးကျလိုင်းများမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများ A2 ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖွစျလိမျ့မညျ ဗီဇာဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေးအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 432800 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: စီးပွားရေး Anafartalar Mah ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ Hippodrome CAD ။ အမှတ်306330 ALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်း ...
ယင်းမက်ထရိုနှင့် metrobus မှတ်တိုင်ကနေအစ္စတန်ဘူလ်ဗုံးသတိပေးချက်ထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ 28 / 07 / 2015 ယင်းမက်ထရိုနှင့် metrobus ကနေအစ္စတန်ဘူလ်ရဲဗုံးနှိုးဆော်သံကိုရပ်တန့်: အစ္စတန်ဘူလ်ရဲဌာနရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့စေလွှတ်ကြောက်ရွံ့သတိပေးချက်များအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေသူများကဖန်တီးထားသည်။ အဆိုပါ4အတွက်အရေးပါသောသတိပေးချက်မက်ထရိုနှင့် metrobus မှတ်တိုင်များများအတွက်သတိပေးချက်များပါဝင်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်၏ကုန်တိုက်ကြီးတွေကနေဝေးနေပါ! Suruc ပေါက်ကွဲမှုကလည်းအရေးပေါ်သတိပေးမှုကိုအကြမ်းဖက်ဝါဒအစ္စတန်ဘူလ်ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏တိုးပွားလာလုပ်ရပ်များနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းအချက်များအပေါ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတိပေးချက်များအမည်များတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကိုပေး၏။ ရဲတပ်ဖွဲ့, Yenikapi, Hacıosman၏စာသားအရ, Taksim နှင့် Osmanbey မက်ထရိုအတွက်အားလုံးမှတ်တိုင်များများအတွက်သတိပေးချက်များပေးခဲ့ Metrobus လိုင်းနှင့်အတူရပ်လိုက်နိုင်သည်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၏ပစ်မှတ်အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဆောင်းပါးမောလ်များအရသိရသည်။ ၏အစ္စတန်ဘူလ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုအတွက်အမှန်ဖြစ်ပျက်လာသည် social media တောင်းဆိုပါ ...
တူရကီက Metro စခန်းများနှင့်ရထားလိုင်းများမြေပုံ 12 / 02 / 2019 တူရကီက Metro လိုင်းစခန်းများနှင့်ရထားမြေပုံ: အတ္တရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်ဖြစ်သောတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုတူရကီတူရကီ၏မြို့တော်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု။ ရရှိနိုင်တူရကီရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်အလင်းရထားလမ်း, မက်ထရို, cable ကိုကားများနှင့်ခရီးသည်စနစ်များပါဝင်ပါသည်, ထိုအတ္တအားဖြင့် operated အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေးအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်: Dikimevi နှင့်အတူ Ankaray နာမကိုအမှီ - ASTI 30 သြဂုတ်လ 1996 "Light ကရထားလမ်း" တူရကီ၏လမ်းကြောင်းအပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ် လေးလံသောရထားလမ်းစနစ်ဒီဇင်ဘာတွင် 28 1997 စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပါတိတ်လမ်းကြောင်း - ထို Metro name ကိုလခြမ်းနီနှင့်အတူ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 12 2014 ပါတိတ်တွင် - OSB-Törekent ...
နံရံအစ္စတန်ဘူလ် Metrobus ကိုပေါ့စေကြ၏ရပ်ပန်းပွင့်နှင့်အတူတန်ဆာဆင်ခဲ့သည် 01 / 12 / 2013 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, LED မီး Metrobus ရပ်ထွန်းနှင့်အတူ illuminated ပန်းပွင့်နှင့်အတူတန်ဆာဆင်လမ်းဆုံနံရံများ: အဆိုပါရိုးကိုအစ္စတန်ဘူလ် Metrobus ရပ်ပန်းပွင့်လင်းစေခဲ့သည်နှင့်အတူတန်ဆာဆင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ်, အစိမ်းအမြင်, ပန်းခြံများနှင့်ဥယျာဉ်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားစည်ပင်သာယာခွင့်ဖြင့်ကြေညာချက်အရ, ရေကန်ကဲ့သို့အရပ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသော themes များပေါ်တွင်မြို့လမ်းဆုံ, မြို့ရိုး, လမ်းများ, အသစ်လုပ်ဖြစ်စဉ်များဟာİstanbullular'ınမှတင်ပြခဲ့သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းအထူးသဖြင့်လမ်းဆုံ၏ဒေါင်လိုက်ဥယျာဉ်တော်တန်တိုင်းရိုး၌ဖွံ့ဖြိုးပြီးအသစ်စတင်လျှောက်လွှာ, အစဉ်အလာမီးခိုးရောင်မြို့ရိုးကိုအမှုပေါင်း၏ monotony ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ ရောင်စုံရာသီအလိုက်ပန်း Dizilirk အလျားလိုက်, သူတို့ကိုပိုပြီးဗေဒနှင့်အဆင်ပြေခရီးစေရန်ခွင့်ပြု, ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူ sumptuous စားပွဲပေါ်မှာဖြင့်လိုက်ပါသွား။ အဆိုပါ illuminated နံရံများနီးပါးအနုပညာများမှာ ...
အစ္စတန်ဘူလ် Metrobus ဘူတာမြေပုံ 05 / 08 / 2019 Metrobus ဘူတာမြေပုံ: အ Metrobus အပေါငျးတို့သကိုရပ်တန့်တဦးတည်းကသင်သွားပါဘယ်မှာရပ်တန့်, သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်တည်နေရာအချက်အလက်များ၏ရပ်တန့် share နိုင် Metrobus မှအကွာအဝေးသွားနှင့်သင်ယူဖို့လိုတဲ့နေရာကိုအနီးဆုံး Metrobus မှတ်တိုင်ဖြစ်သောတူမြေပုံပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ Morphou ရပ်ကွက် Hadimkoy သမ္မတနိုင်ငံ Haramidere Haramidere စက်မှု Saadetdere ဗဟိုခရိုင်Ambarlıမုဆိုး၏ Metrobus ဘူတာTÜYAPBeylikdüzüBeylikdüzüမြူနီစီပယ်မုဆိုး (IU သည်ကျောင်းပရဝုဏ်) Şükrübey IETT စခန်း Kucukcekmece Cennet Mah ။ Yeşilova (Florya) BeşyolSefaköy Yenibosna (တာဝါတိုင်) Şirinevler (Atakoy) Bahçelievlerİncirli (ဘဝ) Zeytinburnu Metro Merter CevizliTopkapıBayrampaşaခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့် (Maltepe) Vatan Caddesi Edirnekapı Ayvansaray HalıcıoğluOkmeydanı Perper SSK OkmeydanıဆေးရုံÇağlayanMecidiyeköy ...
အတ္တ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, ပါတိတ်က Metro ဘူတာ, နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်မြေအောက်ရထားဘူတာအကြားတိုက်ရိုက်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်တာဖြစ်ပါတယ် 26 / 12 / 2016 တိုက်ရိုက်ဘတ်စ်ကားများတွင်အတ္တ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, ပါတိတ်က Metro ဘူတာ, လုပ်ရန်မီထရိုဘူတာနှင့်အတူနောက်ဆုံးမှတ်တိုင်အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများတိုက်ရိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသေချာစေရန်ဖန်ဆင်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များအပေါ် Eskisehir တက္ကသိုလ်စတင် 26 တနင်္လာနေ့ဒီဇင်ဘာဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းနှင့်ပါတိတ်၏အတ္တအရာရှိတွေကသူတို့အသစ်တစ်ခုကိုဘတ်စ်ကားလိုင်းဖွင့်လှစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများ၎င်းတို့၏ access ကိုညွှန်ကြားနိုင်ရန်အတွက်Eskişehirအဝေးပြေးပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးတက္ကသိုလ်နှင့်အတူဤဒေသတွင်ထိုင်ခရီးသည်, ပါတိတ်က Metro ဘူတာ, ဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများ၏လမ်းကြောင်းကနောက်ဆုံးမှတ်တိုင်, Osa ငါက Metro ဘူတာကနေစတင်ပါလိမ့်မည် လွန်ခံရပြီးနောက် Anadolu Boulevard, လုပ်ရန်မီထရိုဘူတာမှာအဆုံးသတ်လိမ့်မယ် ...
ကြေညာလိုက်သည် Kestel လိုင်းဘူတာအမည်များ 17 / 05 / 2012 Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံ, Bursaray Kestel7သစ်ကိုဘူတာရုံများ၏အမည်များကိုဖော်ထုတ်အဆင့်ပြန်တမ်းပါလိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံးဘူတာ Mimar Sinan-Orhangazi University မှArabayatağıဆွေးနွေး၏အမည်ပေးထားခဲ့သည်။ CHP Group မှ SözcüOsman Ayradill သငျသညျနာမတျောကိုရောင်းချရန်ရှိပါတယ် "သူတို့ကအလွန်နိမ့်ဖြစ်ရန်အတွက်အလှူငွေဆန့်ကျင်အလုပ်သမားပါတီ Korupark ၏အမည်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်မယ့်, အချို့ကိုသင်ကငွေရရှိပါသည်။ သင်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ဘူတာရုံ၏နာမကိုထားဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာတွင်လား ဤလူမျိုးကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏ရာပေါင်းများစွာဘို့စိန်ခေါ်ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ရုံ Mimar Sinan, ထိုရပ်ကွက်အတွင်း၏နာမတော်ကြောင့်၎င်း, ကနာမတျော၏စည်းကမ်းချက်များ၌မှန်ကန်သောပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤကြော်ငြာများအတွက်ပိုက်ဆံရကြလိမ့်မည်နည်း ငါတို့သည်နောက်ကန့်ကွက်ကြသည်အခြားဘူတာရုံအမည်များ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Mimar Sinan ထံမှ ...
BeylikdüzüTÜYAP - Bahçelievler - Kirazli Metro
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metrobus ဘူတာ
လင်းယုန်သဲသောင်ပြင် - Pendik E5 - Sabiha ရွှေ့ပြောင်း Metro လေဆိပ်
Tamer Miller ဟုသူကဆိုသည်:
Hunter ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ထောက်ပြပြီးနောက်ဖန်ဆင်း Metrobus လိုင်းများ၏ရပ်နားထားအဆိုပါစက်လှေကား, ဒီမှာပြုသောအမှုကြီးမားလမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်မသက်မသာလူတွေကိုပေးဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုလုံးကိုသိပ်ကြီးလွန်းခြင်းနှင့်များမှာ (နှစ်ခုkısmınaထမ်းဘိုးတို့ကိုဖန်ဆင်း) နှင့်ဆင်းသက်သောအဘို့ကိုရန်အလွန်နီးစပ်သည်။ ဘယ်ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်ခရီးသည်ပေးသည်။ အခက်အခဲများကြုံနေရသူနိုင်ငံသားတွေ၏အိတ်အိတ်များနှင့်ဥစ္စာ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တူရကီရဲ့ဒီမှာခရိုင်တဦးနှင့်အတူတစ်ဦးသောလူဦးရေနှင့်အတူလူဦးရေအများဆုံး၏ယနေ့Beylikdüzüခရိုင်အဖြစ်ခွဲဝေမော်တော်ယာဉ်များ၏နံပါတ်မလုံလောက်များမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမူကား, သငျသညျမှထုတ်လွှင့်ဖို့ဘာသာရပ်တစ်ခုနိုင်ငံသားအဖြစ်, ငါအဖြေတစ်ခုတောင်းဆိုလိမ့်မယ်။ ရိုးသားစွာ။
Halil Uçar ဟုသူကဆိုသည်:
ဆောက်လုပ်ရေး output ကိုကဒ်ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့တူသောနေရာများအတွက်ကြောင့်အခြို့သောဒေသများရှိကျဉ်းမြောင်းသောတင်းကုပ်ပြဿနာများကြုံနေရသည်။ နယူးဖြင့်ခေတ္တဤဒေသများအတွက်လှုပ်ရှားမှုများချဲ့ထွင်ရန်မဖြစ်စေရောက်ရှိမည်။
ယင်းမက်ထရိုTaşdelen t ကိုတောင်မှတိုင်ကြား se ne Remove လုပ်နည်း bilbort မသိရပါဘူးဒီမှာကလူကလာ Cekmekoy
ယင်းမက်ထရိုနှင့် metrobus မှတ်တိုင်ကနေအစ္စတန်ဘူလ်ဗုံးသတိပေးချက်ထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့
နံရံအစ္စတန်ဘူလ် Metrobus ကိုပေါ့စေကြ၏ရပ်ပန်းပွင့်နှင့်အတူတန်ဆာဆင်ခဲ့သည်
အတ္တ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, ပါတိတ်က Metro ဘူတာ, နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်မြေအောက်ရထားဘူတာအကြားတိုက်ရိုက်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်တာဖြစ်ပါတယ်